Iimpawu - Iingcaciso kunye nemizekelo
Igama elithi hteronym lineenkcazelo ezininzi.
(1) Ii- Heteronyms zichazwa ngokuqhelekileyo njengamagama amabini okanye ngaphezulu kunye nesipelingi esifanayo kodwa izichazo ezahlukeneyo kunye neentsingiselo . I-Adjective: i- heteronymous . Yaziwa nangokuthi yi- heterophones .
Kwimimiselo kunye nokuqwalaselwa (ngezantsi), phawula ukuba uDavid Rothwell ubhekiselele ukuba isichazamazwi " siyakubonakala sisichaza ngokucacileyo ukuba ' ukuzithiba .' Ngaloo ndlela, akufuneki ngokupheleleyo, kwaye kufuneka ulibale ngokufumaneka kwayo ngokukhawuleza. "
(2) Kweminye imida yeelwimi , igama elithi hteronym libhekisela kumazwi ahlukeneyo (okanye i- regionalisms ) ngamagama athile asetyenziswa ngokubanzi ngolwimi. Ngokomzekelo, kwiindawo zaseMelika yaseMzantsi Melika, umzila ongasendleleni (i-US) okanye i- pavement (UK) ibizwa ngokuba yi- banquette .
(3) Kwiincwadi, igama elithi heteronym ngezinye izikhathi libhekisela kumbhali wokuguqula i-ego okanye i- persona . Olu tyenziswa lwenziwa ngumlobi wasePortugal uFernando Pessoa (1888-1935).
200 ama-Homonyms, ama-Homophones kunye nee-homographs
I-Homonyms ne- Homonymy
Ukususela kwisiGrike, "elinye igama"
Imizekelo kunye nokuqwalaselwa (Inkcazo # 1)
Isibizo segama (umzila wamanzi okanye umgqugquzeli wamanzi) kunye negama lesibizo (umgcini). Isibizo sokuqala (sichazwa nge-SOO-er) sithathwe kwisiLatini, "esihambelana namanzi"; okwesibini (ebizwa nge-SO-er) ukusuka kwisiSanskrit, "umtya, umtya."
"I-clown yayiphalaza ngeenxa zonke xa ieskisi zavuma
Kuye i- moped entsha yokuthenga.
Isiqhumiso asitshisa sasiqhumisela ukuba ahambe
Ukulila ngeentlungu eziso lakhe. "
(URichard Lederer, "I-Hymn to Heteronyms." I-Circus yeLizwi: Incwadi-Incwadi epheleleyo.I- Merriam-Webster, 1998)
"Nangona i- invalid ibonakala i-pallid,
Wathi umthandi wakhe:
Ukunyaniseka akuvumelekanga . "
(UFelicia Lamport noGeorge Cooper, "Kukho uMgcini-mgcini kwi-Sewer: A Primer for Heteronymphiles," 2000)
"Iimpawu zomoya kufuneka ziqhumisele abafundi belizwe langaphandle! Andiyi kucinga indlela yokuziva kungekhona xa bechitha iiyure befunda igama eliqhelekileyo lesiNgesi, igama elincinci elincinane, bafumana intsingiselo yesibini kunye nokubiza! uyakhungathekiswa ngamagama ethu angamaNgesi asetyenziswayo, okufuneka, ukuba simele sivume, anokuba ngumjelo kunye nokungafuni ukuchazwa. " (UDavid Bergeron, "Iimpawu zeeHeteronyms." IsiNgesi namhlanje , ngoOktobha 1990)
Iinkcazo ezahlukeneyo zeHeteronym
" Iimpawu zengqungquthela ezingabonakaliyo ngokufanayo." Amagama aqabulisa (amanzi esweni) kunye nokuqhawula (ukuvuthwa) yintetho. Qaphela ukuba amagama amagama , i-homograph, i-homophone kunye ne- heteronym inokuba nengqiqo. " (Bruce M. Rowe noDiane P. Levine, IsiCwangciso seNkcazelo yeeLwimi , isi-4 eRoutledge, 2016).
"I- Oxford Dictionary yesiNgesi inika iinkcazo ezintathu ze- heteronym ... Inkqubo yam ye- Shorter Oxford idibanisa izinto ngakumbi. Iqala ngeenkcazelo ezingaphantsi kuncedo" Enye okanye eminye imiqathango emibini, kodwa ke iyaqhubeka:
- Igama elichazwe njengelinye kodwa lunezandi ezahlukeneyo kunye nencazelo;
- Igama lento ngolwimi olunye oluguqulelwe olunye ulwimi.
Ngaphandle komnye unokuyenza nayiphi na ingqiqo yeenkcazelo zee-Oxford ezahlukahlukeneyo zegama elithi 'imbonakalo,' kubonakala ngathi yinto echazwe ngokuchanekileyo ' yegama lomntu.' Ngaloo ndlela, akufuneki ngokupheleleyo, kwaye kufuneka ulibale ngokuhlala kwayo ngokukhawuleza. "(UDavid Rothwell, iDictionary of Homonyms . Wordsworth, 2007)
Oko Okumele Uyazi Ngokungabi Nciphiso Lokunciphisa (NDL)
I-California Lutheran University Admissions
Indlela Yokulondoloza Amakhemikhi Ozenzelayo
2007 Suzuki GSXR-1000 Uhlolo olupheleleyo kunye neempembelelo
Ukuzibandakanya kunye nokuziPhakamisa kwakho
Umthetho 10 weGalati: I-Order ye Play
Isikhokelo seeKholeji zeeKholeji zeeKholeji
I-Mahjong Mania: Funda indlela yokudlala i-Mahjong
Iingcaphuso ezikhuthazayo zabaFundi abaPhezulu nabaTitshala bazo